Isizathu salokhu siwukuthi yonke usana regurgitation ijwayelekile bokuphila mkhuba. Inani elincane okuqukethwe isisu kulesi sifundazwe ingena emphinjeni futhi ngalo ingaphakathi ngomlomo. Ukubhekana nale nkinga ngokusebenzisa ekhethekile ubisi losana. Abazali abaningi makudle "NAS Antireflyuks" inhlanganisela. Ake sicabangele izinzuzo kulo mkhiqizo futhi analogs yayo.
Kungani izingane uhlanze?
Izinsana izinyanga mayelana 4-5 isifo into eyaziwa ngokuthi regurgitation. Le nqubo nokuguqulwa lapho ukhonkolo ingxenye okuqukethwe isisu emphinjeni engenhla. isimangaliso esifanayo kwenzeka ngisho izingane engumqemane. Ngokuvamile, isizathu itholakala ukungapheleli wokugaya ukudla. Emphinjeni kusukela usayizi encane ezinsaneni, nesisu ngokuvamile thwi. Nge wokwehla imisipha isiyingi elise phakathi emphinjeni kanye isisu, umntfwana angene ebuhlanzweni.
Enye yezimbangela ukuthi kungase kubangele lomkhuba Uphinde abhekwe ukugwinya umoya phakathi feedings. Futhi kukhona njengoba e webele kanye ifomula yokudla. Regurgitation kungadalwa ukudla inqwaba ukudla kuka ingane izidingo ngesikhathi ube neminyaka ethile ubudala. Le nkinga ngokukhethekile sibi izingane, ukusuthisa nge ubisi lwebhodlela.
ukuhlanza eziphikelelayo ungakhuluma mayelana nokwephulwa sína imvuthuluka umzimba: waqinisa intracranial, pathologies ka ipheshana wokugaya ukudla futhi uqondiswe isimiso sezinzwa esiyinhloko.
Uma pipsqueak kuyinto ibhodlela, futhi uhlushwa ukuhlanza, okokuqala kunakho konke, kumelwe ukhethe ilungelo ubisi losana. abakhiqizi ukudla Baby ukunikela umugqa ekhethekile imikhiqizo izinsana nale nkinga. Izingxube ezinjalo zibizwa ngokuthi ama-anti-Reflux. Bangabakhe umsoco zokwelapha kanye azikwazi esetshenziswa njengoba isidlo esikhulu kwengane.
Ithethwe ingxube antireflyuks has a ukungaguquguquki obukhulu, okuvumela ukuba 'uhlale' esiswini sengane. Khomba amandla esinjalo singamane wezingane ezisanda kuzalwa. Udokotela inquma isikimu yokudla. Ngokugcwele ukudla yobisi ingane ayikwazi inikezwe.
Uma nganoma isiphi isizathu ingane ayikwazi ukuthola ubisi lwebele, kubalulekile ukukhetha ilungelo esikhundleni sakhe esihle-ke. Okwamanje, yokufakelwa Izingxube abakhiqizi ukunikela Ukukhetha eziningi imikhiqizo. Kunzima kakhulu ongakhetha kuzo ezifana omkhulu umkhiqizo uhla.
Kumele kukhunjulwe ukuthi okungcono formula for nosana ingenye esiye udokotela. Nokho, abazali babhekana yokuthi ingane lungafuni umkhiqizo elinjalo, noma ngaphezulu ngokuvamile uqala ukumkhafulela up. Susa kungenzeka zokugcina kuphela esebenzisa antireflux Izingxube:
"Ugogo Antireflyuks ngobhasikidi."
Iningi imikhiqizo whey amaprotheni sikunqobe kozeinom njengasezulwini ubisi lwebele (ngaphandle - "Nutrilak-AR"). Zonke Izingxube ihlukaniswa ngokweminyaka uhlobo thickener. Ezinye aqukethe isikhonyane emabhontjisi gum, abanye - isitashi. Lezi izinto ezisetshenziswa njengendlela thickener.
Lezinkumbi emabhontjisi gum kuyinto polysaccharide yemvelo ezingavikelekile kugaywe ku esiswini. Ingqikithi usuke ethuthukisa ingress okusheshayo lokuqukethwe esiswini emathunjini, lapho iqala kwenzeke eqhekeza. Lezinkumbi emabhontjisi gum kuyinto probiotic ezinhle futhi aqede ngempumelelo ukuqunjelwa.
I isitashi lichaza ekwakheni amafomula usana ophethe okuqukethwe umuzwa isisu satiety ngenkathi sigcina umntwana. Kumele kukhunjulwe ukuthi ingxube ezinjalo kungabangela izinkinga nge wamathumbu ukunyakaza izinsana.
Usana ifomula "Antireflyuks Nan"
Ukwakheka kwalo mkhiqizo zihlanganisa i-lactose, amazambane isitashi, amafutha yemifino, hydrolyzed (kancane) whey amaprotheni, i-calcium ne-magnesium chloride, taurine, sulfate ayoni, ne-zinc, nucleotide nezinye izinto eziwusizo. Umenzi idale ifomula ehlukile izingane abadinga ukudla okunamafutha ekhethekile. Kulokhu, ingane izothola zonke izakhi ezidingekayo ze-nentuthuko egcwele.
Abazali abaningi bathi umkhiqizo yobisi uye wangisiza ngempela ukuze akhulule grudnichka kusukela regurgitation futhi kugayeke. A ingxube Nestle Nan kusukela umphumela antireflux kumele kusetshenziswe nezinye ukudla noma ukuncelisa ibele.
Kanjani ukunikeza ingxube?
Abazali kufanele bakhumbule ukuthi inhlanganisela AR esinelebuli kukhona ekwelapheni. Nikeza ingane esanda kuzalwa kuphela lokhu kudla akuvunyelwe. Ngaphezu kwalokho antireflux, umntwana kufanele zithole ingxube ejwayelekile. ukudla Dairy, equkethe isitashi, ngokuvamile ezinqunyiwe maqondana nezingane sezinyawo evamile. Regurgitation kufanele kube kuningi. Isikhathi isicelo - sezinsuku ezingengaphansi kuka-30.
Uma ingane ibhodlela, owondla ingxube evamile esikhundleni "Antireflyuks NAS". Odokotela batusa ukuthi ngenkathi amanzi dopaivat umntwana. Amandla ukusebenzisa ngokuqapha ngenkathi ibele. Ukuze regurgitation imvuthuluka ngaphansi okhathazekile kufanele kube ngaphambi yokondla ukunikeza nenye 10-20 ml.
Kuleso simo, uma ingane akagcini ukuhlanza futhi baqala ukuphinda kaningi, udinga ukukhetha inhlanganisela ezahlukene.
Izingxube for ababelethwa kungakafiki isikhathi
Izingane azalelwa kwesikhathi, badinge ukunakekelwa okukhethekile kanye nokudla. Ukuhlangabezana nezidingo izingane ekhethekile inhlanganisela okhethekile ezizalwa ngaphambi kwesikhathi. Lo mkhiqizo has a ukufana esiphezulu nge ubisi lukamama, kodwa uqukethe umsoco omningi futhi umthwalo ubuncane beya wokugaya ukudla.
Izingxube for LBW futhi preterm izingane kilojoule angaphezu. Lezi zinto zibandakanya okuqukethwe amaprotheni kalula digestible namafutha, lactose encishisiwe anda. Njengoba izingxenye eyengeziwe, baby ukudla ahlanganiswe glucose, maltodextrin, taurine, ama-nucleotide. Iqukethe amavithamini amaningi namaminerali.
Omunye Izingxube kangcono izingane ngokuqondene nokuzalwa ongaphakeme isisindo ochwepheshe ngokuthi Nestle Nan Oku. Ukwakheka umkhiqizo abenokuqukethwe anda amanani of whey amaprotheni (70%). Ngaphezu kwalokho, inhlanganisela ahlanganiswe imvuthu izinto ezihlukahlukene eziwusizo. Njengoba esikhundleni nomkhiqizi isitashi isebenzisa maltodextrin - izidakamizwa etholwe cleavage yemifino isitashi. Ukuze ababelethwa kungakafiki isikhathi, le ngxenye ziwusizo kakhulu.
Kumele kukhunjulwe ukuthi umkhiqizo asifanele imvuthu abaphethwe galactosemia, i yokungezwani komzimba ukuze inkomazi obisi ukungabekezelelani noma glyukozogalaktoznoy.
Ingxube ngoba ezizalwa ngaphambi kwesikhathi usisebenzise ngisho egunjini lasesibhedlela noma womama. Ngenxa yale njongo ingasatshenziswa ngepayipi, noma ukunikeza ingane ibhodlela. Lapho ekhetha yobisi umkhiqizo uyakucabangela isisindo sengane. A ingxube "Pres NAS" kufanelekile izingane linesisindo 1800. Uma ingane ukala engaphansi, kufanele busuka Ukudla "Nutrilon 0 Oku", "Oku Friso" noma "Similac Special Ukunakekela».
Uma isizinda isingeniso ingxube kukhona izinkinga kanye ipheshana emathunjini (ukuqunjelwa, colic), kumele ukhethe omunye umkhiqizo. Ifomula kangcono ezacile osanda kuzalwa ngenye ukuthi ngeke siphazamise ukugaya evamile bese uvumele ukuze isisindo sakhe sithi kancane.